ငွေလဲနှုန်း MMK သို့ DKK, မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ဒိန်းမတ်ခရိုဏာ, ပွောငျး
ငွေလဲနှုန်း MMK — DKK ပွောငျး မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ဒိန်းမတ်ခရိုဏာ, ဂဏန်းတွက်စက်, ဘယ်လောက်အလိုတော်
0,00 DKK ဒိန်းမတ်ခရိုဏာ
ဒီငွေလဲနှုန်း MMK/DKK ရက်စွဲအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ 25.10.2020 01:54
သင့်အနေဖြင့်ငွေကြေးကူးပြောင်းခြင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်များမှာ မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ (MMK) и ဒိန်းမတ်ခရိုဏာ (DKK). အဆိုပါလဲလှယ်မှုနှုန်းကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါသည် 25.10.2020 01:54.
ဒိန်းမတ်ခရိုဏာ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို DKK) — : ဒေသခံငွေကြေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါသည် ဒိန်းမတ်, ဖာရိုးကျွန်းစု, ဂရင်းလန်း.
5 1 025,86
102051,71
50 10 258,55
100 20 517,10
200 41 034,21
500 102 585,52
1000 205 171,04
2000 410 342,08
5000 1 025 855,21
100002051 710,41
200004103 420,83
50000 10 258 552,07
ငွေကြေးက ISO code ကို DKK
ဒင်္ဂါးပြား 50 Ere, 1, 2, 5, 10, 20 DKK
ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတွေ 50, 100, 200, 500, 1000 DKK
နိဒါန်း၏တစ်နှစ်တာ 1873 ခုနှစ်
ပြဿနာများ၏ဘဏ် Danmark Nationalbank
ပူစီနံ တော်ဝင်ဒိ Mint,
ACS အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Page load 0.0404 s.